Indlela ukupheka nge Quince e multivarka
Quince iwumkhiqizo enjalo engasetshenziswa ukulungiselela noma iyiphi izitsha iqembu ezisukela amasobho kanye nama-dessert langesikhatheso ngoKukhulamungu. Nokho, elinye ifomu, akukuhle kakhulu, uphehla eziningi zokupheka amalungiselelo ezifuywayo kanye nokulondolozwa. Ngakho umbuzo kanjani ukupheka nge Quince, zithandwa kakhulu futhi has a inombolo enkulu izimpendulo ezihlobene zokupheka ezahlukene.
Kunezindlela eziningi ukupheka Quince ujamu. Noma kunjalo, konke libhekene ukwelashwa ukushisa, khona izinongo ehlukahlukene kanye nemikhiqizo ahlabayo. Sinikeza okunye ukukhetha zendlela yokwenza ujamu kusuka Quince. Indlela ka Kulokhu kudinga Multivarki. Tapping liyasetshenziswa lapha ngesimo cubes ezincane, okuyinto kufanele aminyene ngokwanele, kodwa ngesikhathi esifanayo iphathwa kuze kucace.
- Quince fresh - 2 kg;
Leresiphi yakhelwe ukuthola ukunambitheka yokuqala umkhiqizo, kodwa uma oyifunayo, kungenzeka ukwengeza nengcosana izinongo ehlukahlukene ezinikeza uju iphunga.
Ngaphambi kokuthi uqale ukupheka nge Quince e multivarka, kumele ukhethe esiyinhloko kahle. Iqiniso ukuthi lezi zithelo babe tartness alandisa. Ngakho-ke, Quince udinga ukuthenga ezivuthiwe wasiqashisa yenza izinsuku ezimbalwa endaweni emnyama.
Ngemva kwalokho izithelo wageza usebenzisa isiponji uma kunesidingo, balahle enamathela ethize. Khona-ke anikwa zona ukuze ome, dabbing ithawula ephepheni. Ngokulandelayo, izithelo uthathe cubes ezincane, asuse imbewu. Kuyinto kulolu chungechunge uzokwenza Quince jam ngo multivarka ezilinganiswe ngokuphelele futhi okumnandi.
Ngemva kwalokho, izithelo zafakwa esitsheni futhi embozwe ushukela. Ngenxa yalokho, i-Quince kumelwe zibe yizinsuku ezingu-1-2. Kulokhu, ngeke ukukhulula ijusi ukuthola isimo ezidingekayo efanelekayo kucutshungulwe.
Ukuze apheke esiphundu ujamu Quince multivarka, kufanele usebenzise imodi okuhloswe wokukucima. Kuhilela ukubhekana Ukushisa nokugcina Reflux amancane iyunifomu. Ngakho-ke, zonke okuqukethwe isitsha akhishwe kuwo wonke amadivayisi pan, uvale lid upheke ihora.
Ngemva kwalesi sikhathi Quince jam ngo multivarka kufanele Sekukancane. Zonke cubes babe ukubukeka esobala, kanye nenani uketshezi zanda kakhulu. Kuleli qophelo ungakwazi ukwengeza ezihlukahlukene izinongo kanye ibila zonke angu-10.
Lapho ujamu nje kuphekwe, wayihlukumeza kakhulu masinyane, bayeke namakani pre-inzalo futhi ekhethekile roll nesembozo. Khona-ke isitsha nabokhulumile wafaka isivalo phansi kuphole. Ngemva kokuthi i-pass ihora, ukulungiselela ujamu, ungakwazi ucabange ukuthi ubhekene endaweni emnyama futhi cool yokugcina yesikhathi eside, lapho kungase kube eminyakeni embalwa ngaphambi kokuba ukudliwa abantu.
Indlela ukulungiselela gherkins zicwiliswe. Recipe Amalungiselelo ebusika
Indlela yokwenza i-hanger ku- "Meincraft" nokuthi ungayisebenzisa kanjani?